Archive du 20170909
Hiary Rapanoelina Navoaka saingy...
Niakatra Fitsarana ambony omaly zoma 8 septambra ny raharaha Hiary Rapanoelina, ilay mpanakanto nohelohin’ny Fitsarana ambaratonga
Depiote Randrianasolo Nicolas Ny governemanta no tsy mahavita azy
Raha ny zava-misy any Betroka dia izaho solombavambahoaka izay tompon’andraikitra any an-toerana no tokony hahalala izany voalohany indrindra, hoy ny depiote Randrianasolo Jean Nicolas teny Antaninarenina omaly.
Fifidianana 2018 Mila hajaina ny fe-potoana, hoy ny Kmf/Cnoe
Manahy ny fizotran’ny fanomanana ny fifidianana hotanterahana amin’ny taona ho avy ny Kmf/Cnoe (Komitim-pirenena Mpanara-maso ny Fifidianana).
Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina Manamboninahitra 32 nahazo fiofanana
Nisy ny fiaraha-miasa ara-tafika teo amin’ny Malagasy sy ny Amerikanina, niompana tamin’ny resaka haitarika na « leadership ».
Rafitra Boriborintany Nesorina tao amin’ny taratasin’ny Fokontany
Nofoanana ao anatin’ny taratasim-panjakana indray amin’izao fotoana izao ny boriborintany.
Gazety Tia Tanindrazana 8 taona katroka anio
Feno 8 taona katroka anio sabotsy 9 septambra 2017 ny gazety Tia Tanindrazana.
Rafitra ADPCSE Hiady ho an’ny mpiasa rehetra
Araka ny efa nampahafatarin-dry zareo avy eo anivon’ilay rafitra vaovao ADPCSE ao anatin’ny Fivondronamben’ireo Sendikan’ny mpiasa Malagasy Revolisionera ihany na ny FISEMARE,
Fiatrehana ny loza voajanahary Niofana ireo mpiahy ny olona manana fahasembanana
Miomana amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary ireo fikambanana miahy ny olona manana fahasembanana ao Vakinankaratra.
« Salon des Etudes Sup » Nanampy tanora maro
Nifarana omaly zoma 8 septambra ny andiany faha-14 tamin’ny “Salon des Etudes Sup’” notanterahin’ny Madajeune teny amin’ny lapan’ny
Rugby Malagasy Maneho ny heviny ireo mpitia lavalava
Manoloana ny disadisa eo anivon’ny taranja rugby izay tsy ahitam-bahaolana hatramin’izao dia niala tamin’ny fahanginany ireo mpitia ny lalao lavalava.
Kick Boxing Hiady ny tompondakan’ny seksiona Antananarivo
Nambaran’ny filohany, Ralijaona Léon, fa hanatanteraka ny fiadiana ny ho tompondakany taona 2017 etsy amin’ny Dojo Cospn Mahamasina amin’ny
Tsy hanangam-pahavalo Fa hankato firaisankina
“Autoroute RN2” Roa taona mahery no efa natao sonia
Lalam-pirenena 8.000 amin’ny 10.000km no voakojakoja tamin’ny taona 2016 noho ny tsy fahampian’ny bolongam-bola.
Mpamily nahafaty olona 3 Afa-maina tsy nisy tohiny …
Sazy mihantona 3 volana no azon'ilay mpamilin’ilay fiara nahafaty olona 3 teny Ivandry ny 21 mey 2017 teo, izany hoe efa tapitra.
Seranam-piaramanidina Ivato Hohamafisina ny fiarovana ny ain’ireo mpandeha
Mitohy hatrany ny asa fanamboarana sy fanajariana ny seranam-piaramanidina eny Ivato hiandraiketan’ny Ravinala Airports.
Ankizy ôtista Manolo-tanana azy ireo ny vondrona Star
Iray amin’ireo ankizy miisa 53 eto Madagasikara ankehitriny no fantatra fa manana toe-batana ôtista, tarehimarika tsy mbola tena ofisialy.
Rakoto Frah Hotsarovana amina seho goavana
Ny vatan-dRakoto Frah na Philbert Rabezoza no tsy eo intsony fa ny sangan’asany kosa mbola velona tsy lefin’ny ora sy fotoana.